Alshabaab oo soo bandhigay Sawiradda Weerarkii Baar-Sanguuni - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Alshabaab oo soo bandhigay Sawiradda Weerarkii Baar-Sanguuni
Alshabaab oo soo bandhigay Sawiradda Weerarkii Baar-Sanguuni
July 25, 2018 admin1001
Garabka Warbaahinta ee ururka Alshabaab ayaa soo bandhigay weerarkii 23 Bishan ku qaadeen xero ciidamada Xoogga Dalka iyo Kuwa Jubbaland ku lahaayeen deegaanka Baar-Sanguuni oo gobolka Jubbadda Hoose.
Sawirada ayaa muujinaya ciidanka Alshabaab oo dab qabadsiiyey qeybo ka mid ah xerada, sidoo kale Alshabaab ayaa horey dhowr jeer usoo weeraray xeradaan. iyagoo ku dilay askari Maraykan, taas oo keentay in ciidankii Maraykanka ka guuro xeradan.
Weerarkii Isniintii Xeradan ay Alshabaab ku qaadeen ayaa waxaa ka dhashay khasaare labada dhinac ah, waxaana Alshabaab degmada Jamaame geeyeen Meydad iyo Maxaabiis ka tirsan ciidanka Dowladda.
Kooxda Shabaab ayaa sara u qaaday weerarada xeryaha ciidamada Dowladda, iyagoo arintaan kaga hortagaya guluf colaadeed oo ciidanka dowladu qorsheeyeen in ay ku qaadaan goobaha ay haystaan Alshabaab gobolada Dalka.
WAXAY AHAYD IN LA ABAAL-MARIYO.
Wasiirkii Waxbarashada Soomaaaliya oo Xilkii laga qaaday
Somalia iyo Kenya oo berrito isku wajahaya Hague
Axmed Madoobe iyo James Swan oo kulmay (Sawirro)
Farmaajo oo Yusuf-Garaad ku Amray inuu Xog ka keeno Maxaabiista Somaaliyed Liibiya
December 2, 2017 Cali Yare